Easter Festivities In Europe You Can't Miss | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > इस्टर पर्वहरू युरोप मा तपाईं मिस गर्न सक्दैन
युरोप मा ईस्टर पर्वहरू देखि भिन्न देश देश र शहर देखि शहर. यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण को एक र सबैभन्दा पुरानो हो चाडहरूमा को मसीही चर्च. इस्टर चिहान बाट येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको उत्सव छ.
इस्टर लागि उत्सव मिति हरेक वर्ष परिवर्तन. यो सामान्यतया वसन्त विषुव निम्न पूर्ण चन्द्र पछि पहिलो आइतबार मनाइन्छ. यो हरेक वर्ष विभिन्न समयमा हुन्छ, लेट देखि लिएर मार्च लेट गर्न अप्रिल.
ख्रीष्टियन मा, पवित्र हप्ताको इस्टर अघि सप्ताह छ र पाम आइतबार समावेश, Maundy बिहीबार, राम्रो शुक्रवार र पवित्र शनिबार. यूरोपमा, धेरै देशहरूमा विशाल आगो कहिलेकाहीं भनिन्छ छन् यहूदा आगो प्रकाश द्वारा ईस्टर मनाउन. सुरुमा, यी bonfires वसन्त को आगमन मनाउन गर्न चाहनुभएको. यहाँ आफ्नो मनपर्ने युरोपेली देशहरूमा केही इस्टर मनाउन कसरी द्रुत नजर छ.
नेदरल्यान्ड्स मा ईस्टर सुरू
मा हल्याण्ड, इस्टर लागि तयारी एक दिन सुरु गर्नु अघि Lent. यो दिन "Vastenavond" वा फास्ट हव्वालाई रूपमा जानिन्छ. यो समयमा, नेदरल्यान्ड आफ्नो पर्वहरू मा भाग गर्न चाहनेहरूको विदेशी पर्यटक सबैभन्दा महत्वपूर्ण वृद्धि उठाउँछ.
मानिसहरू अक्सर एक उत्सव संग पालन जो इस्टर सेवाहरूको लागि चर्च धाउन खाना. बच्चाहरु झन्झन् सजाया को खोज मा अन्डा hunts मा जाने उबला अन्डा वा चकलेट अन्डा. मालिक Tikken मनपर्ने इस्टर खेल wherein मान्छे सँगै अन्डा दस्तक छ. खेलको लक्ष्य तपाइँको तोडने बिना अन्य व्यक्तिको अन्डा दरार छ.
आन्ट्वर्प Breda गाडिहरु गर्न
फ्रान्स इस्टर पर्वहरू
फ्रान्सेली एक विशेष चर्च सेवा उपस्थित द्वारा ईस्टर मनाउन, एक उत्सव भोज, र एक ईस्टर अन्डा शिकार. तपाईं चकलेट खरायो संग पसलहरूमा र बेकरी देख्ने, Bells, र वसन्त को संकेत.
फ्रान्सेली पनि चकलेट अन्डा प्रेम, छोराछोरीको इस्टर अन्डा hunts लागि उनलाई व्यापक प्रयोग. फ्रान्सेली पनि एक ढलान कच्चा अन्डा रोलिङ तल समावेश एक अन्डा-रोलिंग प्रतियोगिता छ. कि हावा मा ताजा अन्डा tossing समावेश एक बच्चाको खेल पनि त्यहाँ. एक अन्डा तोड्न पहिलो अर्को बच्चा आफ्नो क्यान्डी केही दिन गर्ने हरुवा निर्धारण गरिन्छ.
एक रोचक इस्टर परम्परा मा फ्रान्स शुक्रवार र इस्टर आइतबार बिहान बीच कुनै चर्च Bells घन्टी को cloches volantes वा छ "उडान Bells।". यो केवल इस्टर आइतबार चर्च सेवा कि Bells घन्टी पछि हो, येशूको पुनरुत्थान मना. फ्रान्स पनि लागि जानिन्छ आफ्नो टाँग्ने reenactments.
इटाली इस्टर पर्वहरू
मा ईस्टर इटाली ला Pasqua रूपमा इटालियनहरू द्वारा उल्लेख छ. अन्य विपरीत युरोपेली देशहरूमा, तपाईं इटाली मा ईस्टर खरायो वा इस्टर अन्डा hunts देख्दैनन्. यो आनन्ददायी उत्सव प्रिय परम्परा बारेमा सबै छ.
धार्मिक processions आयोजना गरिन्छ इटालियन शहर र इस्टर अघि शुक्रवार र शनिबार सहर. इस्टर आइतबार, को उत्सव मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न खाद्य आशा. यो उत्सवहरूको लागि आर्टिचोकहरू र एन्जेलिनो वा पोलेको बच्चो भेडा समावेश गर्ने परम्परा हो र अत्तरका लागि बाख्रा पनि मेन्युमा छ. र मान्छे ढुकुरले आकारको वा मुकुट आकारको रोटी उपहार रूपमा दिन.
रोम मा, एक सतर्कता St मा भइरहेको छ. पवित्र शनिबार पत्रुसको Basilica. यसलाई मा सुरु9यो इस्टर बिहान को सुरु मा ल्याउँछ रूपमा बजे र मध्यरात सम्म मा जान्छ. इस्टर आइतबार, सबैभन्दा प्रतीक्षा ठूलो को पोप को कौसी मा आशिष् निम्त्याउने सुरु.
यस पोप र भेटिकन को कारण, रोम युरोप मा ईस्टर पर्वहरू लागि गन्तव्य हो. मानिसहरू उत्सव सहभागी दुनिया भर आउन र उपस्थित भेटिकन पाम आइतबार आम. यो निःशुल्क किनभने, यो धेरै प्राप्त गर्न सक्छन् भीड.
रोम गाडिहरु गर्न Lucca
तपाईं रोममा इस्टर ठूलो धाउन योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो सबै भन्दा राम्रो छ प्रारम्भिक आफ्नो टिकट बुक. राम्रो दरहरू रमाइलो गर्न अग्रिम आफ्नो सिट बुक. किनभने जस्तै शहर मा ईस्टर पर्वहरू को लोकप्रियता को रोम, पेरिस, र एम्स्टर्डम, यो योजना बुद्धिमानी सधैं छ.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/easter-festivities-europe/ - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#Festivities easter europetravel longtrainjourneys सुझाव trainjourney Tranride प्रशिक्षण सल्लाह रेल यात्रा travelfrance travelnetherlands